China High Proficiency Economical စပျစ်သီး သလဲသီးဖျော်ရည် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |ခုန်ပါ။
A. Scraper-type spray ဓာတ်လှေကား
သံမဏိကွင်း၊ အစားအစာအဆင့်နှင့် မာကျောသော ပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် သံမဏိခြစ်တံ၊ သစ်သီးယိုများကို တားဆီးရန် ချောမွတ်သောဓါးဗိသုကာကို ရွေးချယ်ပါ။တင်သွင်းလာသော သံချေးတက်ခြင်း ဆန့်ကျင်ဘက်ဝက်ဝံ၊ နှစ်ထပ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြုခြင်း၊စဉ်ဆက်မပြတ် ပြောင်းလဲနိုင်သော ဂီယာမော်တာ၊ ပြောင်းလဲနိုင်သော ကြိမ်နှုန်းအမြန်နှုန်းနှင့် လည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နည်းသောခေါင်းစဉ် ဤနေရာတွင် ပါဝင်သည်။
Stainless steel roller conveyor, rotation and solution, check of full range, အဆုံးမလိုအပ်ပါဘူး။လူလုပ်အသီးအနှံပလပ်ဖောင်း၊ ဆေးခြယ်ထားသော ကာဗွန်သံမဏိကွင်း၊ စတီးလ်ဆန့်ကျင်စတီးနင်းခြေနင်း၊ သံမဏိခြံစည်းရိုး။
အီတလီနည်းပညာကို ပေါင်းစပ်ထားခြင်း၊ ဓါးသွားဖွဲ့စည်းပုံ အစုံလိုက်၊ ဖောက်သည် သို့မဟုတ် တိကျသော ပရောဂျက်လိုအပ်ချက်အရ ချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည် ကြက်သွန်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် သင့်လျော်သော ရိုးရာဖွဲ့စည်းပုံနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ဖျော်ရည်ရည်နှုန်းကို 2-3% တိုးစေမည်ဖြစ်သည်။ ငံပြာရည်၊ မုန်လာဥနီဆော့စ်၊ ငရုတ်ကောင်းဆော့စ်၊ ပန်းသီးဆော့စ်နှင့် အခြားအသီးအနှံများနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဆော့စ်များနှင့် ထုတ်ကုန်များ
ဃ။ နှစ်ထပ်အဆင့် ပျော့ဖတ်စက်
၎င်းတွင် tapered mesh ဖွဲ့စည်းပုံရှိပြီး load နှင့်ကွာဟမှုကိုချိန်ညှိနိုင်သည်၊ ကြိမ်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ သို့မှသာဖျော်ရည်ပိုမိုသန့်ရှင်းလိမ့်မည်;အတွင်းပိုင်း mesh အလင်းဝင်ပေါက်သည် မှာယူရန် ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် သီးခြားပရောဂျက်လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံထားသည်။
စွမ်းအင်ပိုမိုသက်သာစေမည့် Single-effect၊ double-effect၊ triple-effect နှင့် multi-effect evaporator၊ဖုန်စုပ်စက်အောက်တွင်၊ စဉ်ဆက်မပြတ် အပူချိန်နိမ့်သော လည်ပတ်နေသော အပူပေးခြင်းသည် ပစ္စည်းအတွင်းရှိ အာဟာရများအပြင် နဂိုမူလက အာဟာရများကို အမြင့်မားဆုံးကာကွယ်ပေးသည်။ရေနွေးငွေ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်နှင့် နှစ်ဆ condensate စနစ်ပါရှိပြီး၊ ၎င်းသည် ရေနွေးငွေ့သုံးစွဲမှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာကိုးခုကို ရရှိထားပြီး စွမ်းအင်ချွေတာရန်- 40% ခန့်၊ ပစ္စည်း၏ကိုယ်ပိုင်အပူဖလှယ်ခြင်း၏ အားသာချက်များကို အပြည့်အဝရယူပါ။
အီတလီနည်းပညာ၊ ခေါင်းခွဲနှင့် ခေါင်းနှစ်လုံး၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖြည့်သွင်းခြင်း၊ ပြန်လာခြင်းကို လျှော့ချပါ။ပိုးသတ်ရန် ရေနွေးငွေ့ထိုးဆေးကို အသုံးပြု၍ ပိုးမွှားအခြေအနေသို့ ဖြည့်သွင်းရန် သေချာစေရန်၊ ထုတ်ကုန်၏ သိုလှောင်မှုသက်တမ်းသည် အခန်းအပူချိန်တွင် နှစ်နှစ်အထိ သက်တမ်းရှိမည်ဖြစ်သည်။ဖြည့်စွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ဒုတိယညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ရှားရန် turntable lifting mode ကိုအသုံးပြုပါ။
ဤလိုင်းသည် မုန်လာဥနီ၊ ရွှေဖရုံသီးပြုပြင်ခြင်းအတွက် သင့်လျော်သည်။နောက်ဆုံးထွက်ကုန် အမျိုးအစားများမှာ အကြည်ဖျော်ရည်၊ တိမ်တိုက်ဖျော်ရည်၊ ဖျော်ရည် အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် စိမ်ထားသော အဖျော်ယမကာများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ရွှေဖရုံသီးမှုန့်နဲ့ မုန်လာဥနီမှုန့်ကိုလည်း ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။အဝတ်လျှော်စက်များ၊ ဓာတ်လှေကား၊ မီးဖိုချောင်သုံးစက်၊ ဖြတ်စက်၊ ကြိတ်စက်၊ အကြိုအပူပေးစက်၊ ကြိတ်စက်၊ ပိုးသတ်ဆေး၊ ဖြည့်စက်များ၊ သုံးလမ်းလေးဆင့် ရေငွေ့ပျံနှင့် မှုတ်အခြောက်ခံတာဝါ၊ အဖြည့်နှင့် တံဆိပ်ကပ်စက် စသည်တို့.ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းသည် အဆင့်မြင့်ဒီဇိုင်းနှင့် အလိုအလျောက်စနစ်၏ မြင့်မားသောအဆင့်ကို လက်ခံသည်။ပင်မပစ္စည်းများကို အရည်အသွေးမြင့် သံမဏိဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး အစားအသောက် ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ အပြည့်အဝ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်း-၃ တန်မှ ၁၅၀၀ တန်/ရက်။
* ကုန်ကြမ်း:မုန်လာဥနီ၊ ရွှေဖရုံသီး
* နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်-အကြည်ဖျော်ရည်၊ တိမ်ဖျော်ရည်၊ ဖျော်ရည်အာရုံစူးစိုက်မှု နှင့် စိမ်ထားသောဖျော်ရည်များ
* ပြုတ်ခြင်းဖြင့် အသားညိုခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်
* ဖျော်ရည်အထွက်နှုန်းတိုးစေရန် နူးညံ့သောတစ်သျှူးများကို အိုမင်းရင့်ရော်စေခြင်း။
* ဖျော်စပ်ခြင်းဖြင့် မတူညီသော အရသာများကို ရရှိနိုင်သည်။
* သန့်ရှင်းရေးစနစ်ပါရှိ၍ သန့်ရှင်းရလွယ်ကူသည်။
* စနစ်ပစ္စည်း အဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုင်းများသည် 304 သံမဏိ သံမဏိဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး အစားအစာ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းမှုနှင့် ဘေးကင်းရေး လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု အပြည့်ရှိသည်။
Whatsapp/Wechat/Mobile: 008613681836263 မည်သည့်စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုမဆိုကြိုဆိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခုအခါ အီတလီကုမ္ပဏီလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ အားသာချက်များကို အသုံးချကာ ယခုအခါ သစ်သီးပြုပြင်ခြင်း၊ အအေးဒဏ်ခံခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ဘက်စုံသုံး အာနိသင်စွမ်းအင်ချွေတာရေး စုစည်းမှု၊ လက်စွပ်အမျိုးအစားပိုးသတ်ခြင်း နှင့် ပိုးသတ်ဆေးဗူးကြီးများသည် ပြည်တွင်းနှင့် မယှဉ်နိုင်သော နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သာလွန်ကောင်းမွန်မှုကို ရရှိစေပါသည်။ဖောက်သည်များနှင့်အညီ နေ့စဉ် သစ်သီးစိမ်း 500KG-1500 တန် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
Turnkey ဖြေရှင်းချက်။သင့်နိုင်ငံတွင် စက်ရုံကို မည်ကဲ့သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင်အနည်းငယ်သိပါက စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား စက်ကိရိယာများကို ပေးရုံသာမက သင့်ထံမှ တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ဂိုဒေါင်ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း (ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ဝန်ထမ်း)၊ အလုပ်သမားသင်တန်း၊ စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အမှားရှာပြင်ခြင်း၊ တစ်သက်တာရောင်းချပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှု စသည်တို့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် “Quality and Service Branding” ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို လိုက်နာပြီး သာလွန်သောစျေးနှုန်းနှင့် ကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုများကြောင့် ပြည်တွင်း၌ ပုံရိပ်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကုမ္ပဏီ၏ထုတ်ကုန်များသည် ကျယ်ပြန့်စွာ စိမ့်ဝင်လျက်ရှိပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ၊ အရှေ့အလယ်ပိုင်း၊ အာဖရိက၊ တောင်အမေရိက၊ ဥရောပနှင့် အခြားနိုင်ငံရပ်ခြားဈေးကွက်များသို့။
တည်ငြိမ်သော သစ်သားအထုပ်သည် စက်ကို ရိုက်ချိုးခြင်းနှင့် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ပလပ်စတစ်ဖလင်သည် စက်ကို စိုစွတ်မှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေပါသည်။
မီးခိုးငွေ့ကင်းစင်သော ပက်ကေ့ခ်ျသည် ချောမွေ့သော အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေးကို ကူညီပေးသည်။
အရွယ်အစားကြီးမားသောစက်ကို အထုပ်မပါဘဲ ကွန်တိန်နာတွင် တပ်ဆင်မည်ဖြစ်သည်။
အရောင်းအကြိုဝန်ဆောင်မှုကျွန်ုပ်တို့သည် သုံးစွဲသူအား ၎င်းတို့၏ဖော်မြူလာနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများအရ အသင့်တော်ဆုံးစက်ကို အကြံပြုနိုင်ပါသည်။“ဒီဇိုင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး”၊ “ထုတ်လုပ်ခြင်း”၊ “တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ကော်မရှင်နာခြင်း”၊ “နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်း” နှင့် “ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှု”။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကုန်ကြမ်း၊ ပုလင်းများ၊ တံဆိပ်များ တင်သွင်းသူအား မိတ်ဆက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်နီယာ မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်ကို လေ့လာရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်လုပ်မှု အလုပ်ရုံမှ ကြိုဆိုပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်အရ စက်များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး စက်များတပ်ဆင်ရန်နှင့် သင့်လုပ်သားများကို လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာကို သင့်စက်ရုံသို့ စေလွှတ်နိုင်ပါသည်။နောက်ထပ်တောင်းဆိုမှုများ။ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးပါ။
4. ပြီးပြည့်စုံသော အစိတ်အပိုင်းများစာရင်း- သင့်စာရင်းရှိ အစိတ်အပိုင်းများ၏ ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချရန်၊ ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီး မြန်ဆန်သော ဝန်ဆောင်မှုကို ပေးဆောင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်ယူသူများ၏ လိုချင်မှု သို့မဟုတ် လိုအပ်သည့် အချိန်ကာလကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းများ၏ ပြီးပြည့်စုံသော စာရင်းကို ပြင်ဆင်ထားပါသည်။
5. ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ရေး- ဖောက်သည်၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေရန်အတွက် စက်ကိရိယာများနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိစေရန်၊ စက်ကိရိယာ၏ လည်ပတ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို မှန်ကန်စွာ ဆုပ်ကိုင်နိုင်စေရန်၊ ဆိုက်တွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ သင်တန်းများ တပ်ဆင်ခြင်းအပြင်၊ထို့အပြင်၊ သင်သည် နည်းပညာကို ပိုမိုလျင်မြန်ပြီး ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဆုပ်ကိုင်နိုင်ရန် ကူညီပေးရန်အတွက် စက်ရုံအလုပ်ရုံများတွင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ အမျိုးမျိုးကို ခေါ်ယူနိုင်သည်။
6.Software နှင့် အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများ- သင်၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများအား စက်ကိရိယာနှင့်ပတ်သက်သည့် အကြံဉာဏ်များကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေရန်အတွက်၊ အကြံပေးအဖွဲ့နှင့် နောက်ဆုံးပေါ်အချက်အလက်များကို မဂ္ဂဇင်းထံသို့ ပုံမှန်ပေးပို့ရန် စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပေးပို့ရန် စီစဉ်ပေးပါမည်။ အနည်းငယ်သိပါက စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ သင့်နိုင်ငံတွင် စက်ရုံကို မည်သို့ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် စက်ကိရိယာများကို ပေးစွမ်းရုံသာမက သင့်ဂိုဒေါင်ဒီဇိုင်း (ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ ရေနွေးငွေ့)၊ အလုပ်သမားသင်တန်း၊ စက်တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် အမှားရှာပြင်ခြင်းတို့မှ တစ်နေရာတည်းတွင် ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။ ရောင်းပြီးနောက်ဝန်ဆောင်မှုစသည်တို့။
ယခင်- အလိုအလျောက် သံမဏိ ကြက်သွန်ဖြူ ကြက်သွန်ဖြူ ခွဲစက် ကြက်သွန်ဖြူ လှီးဖြတ်စက်
နောက်တစ်ခု: Semi-automatic Vacuum Sealing Machine အသေးစား အလိုအလျောက် ဖုန်စုပ်ထုပ်ပိုးစက်
Peach Juice Jam ထုတ်လုပ်မှုအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောလိုင်း
အလိုအလျောက် သစ်သီးဖျော်ရည် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း အပြည့်အစုံ / Ma...
အသေးစား UHT နို့ချက်စက်ရုံ အပြီးအစီးရောင်းမည်။
စက်မှု Frozen Fruit ဒိန်ချဉ် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း